रुँदा स्वास्थ्यलाई पुग्ने फाइदा, यस्ता छन् - ज्ञानविज्ञान
रुँदा स्वास्थ्यलाई पुग्ने फाइदा, यस्ता छन्
रुँनाले तनावरहित एवं हल्का महशुस हुन्छ । आँखाबाट झर्ने आँशु व्यक्तिको मर्म र भावनालाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हो ।
जब कसैले हामीलाई आघात पुर्याउछ वा हामी अत्याधिक दुखी हुन्छौं, त्यस अवस्थामा हामी रुन्छौ । यसरी आँखाबाट खसेको आँशुले तनावबाट मुक्त गर्दछ । यस्ता छन् फाइदाः
आँशुमा यस्तो किसिमको एन्टिबायटिक्स् पाईएकोछ, जसले किटाणुबाट आँखाको रक्षा गर्दछ । आँशुमा एकप्रकारको लिसोजाईम नामक तरल पदार्थ हुन्छ, जसले ५,१० मिनटमा नै नब्बे देखि पन्चनब्बे प्रतिशत ब्याक्टेरियाहरुको सफाया गर्नसक्छ ।
अनुसन्धानबाट देखिएको कुरा के हो भने, जब हामी बढि दुखी वा तनावमा हुन्छौ, त्यस्तो बेला शरीरभित्र केहि टक्सिन केमिकल्स बन्न थाल्छन् । जुन बिषक्त तत्वहरु रुँदा आँखाबाट आँशुको रुपमा बाहिर निस्किन्छ ।
मुड ठिक भएको बेला कहिलेकाही शरीरमा मेग्जिन नामक तत्व बढिभएर घबराहट, परेसानि, थकान, अनाहकमा रीस उठ्ने जस्तो समस्या देखिन्छ । यस अवस्थामा रुनाले शरीरमा मेग्जिनको स्तर कम हुन्छ । जसको फलस्वरुप व्यक्ति आफुलाई हल्का महशुस गर्न थाल्दछन् ।
तनाव घट्दछ :
अत्यधिक तनावको अवस्थामा रुनाले केहि मात्रामा राहत मिल्दछ । रुने प्रकृयाको दौरान शरीरमा एंडोफ्रिन ल्युकामाईन, एकांफालिन तथा प्रोलेक्टिन नामक तत्वहरुको स्तर कम हुन्छ । जसले गर्दा तनाव कम हुन्छ ।
आँखाको ज्योति बढ्छ :
आँखामा आँशु आउनाले आँखाको नानी र परेलीको रसिलोपन बढ्दछ । वैज्ञानिकहरुले यसलाई सिद्धा गरेका छन् कि रुनाले आँखाको सुन्दरता बढ्दछ ।
ति वैज्ञनिकहरुको मतानुसार आँखाको कर्नियाको परत कंजकटाईवालाई आश्रुग्रन्थीद्वारा निस्किने आँशुले ओसिलो बानाईदिन्छ । जस्को फलस्वरुप आँशुमा रहेका शरीरका तत्वहरुद्वारा सुन्दरता निखारेर आउँछ ।
आँखाबाट आँशु निस्किने बेला हारडेरीयन ग्रन्थीबाट एक प्रकारको तेलीय पदार्थ निस्किन्छ, जसको सहायताले कोर्निया नरम र गहिरो हुन् जान्छ । महिलामा पुरुषहरुको तुलनामा बढि आँशुको उत्पादन हुन्छ ।
यही कारण होकि महिलाहरुको आँखा बढि सुन्दर हुन्छन् । यद्यपी अत्याधिक रुनाले आँखाको दृष्टी गुम्न पनि सक्छ ।
Topics #रुँदा स्वास्थ्यलाई पुग्ने फाइदा
Don't Miss it यसरी बच्न सकिन्छ ​ढाड दुख्ने समस्याबाट
Up Next गर्मीमा पनि गोडा सुन्निन्छ भने खतराको लक्षण हो
2 mins ago Pradeep Karki
के धेरै सफाईले बच्चालाई क्यान्सर हुन्छ ? जान्नुहोस्
हामी हाम्रा नानीबाबुहरु विरामी नहुन भनेर के के सम्म गर्छौँ । टेक्नोलोजि र जनचेतनाको बढ्दै गएको यो युगमा आफ्ना छोराछोरीको…
फलभन्दा बढी फाइदाजनक छ अम्बाकाे पात, जान्नुहाेस्
नेपालमा अम्बा सर्वसुलभ रूपमा पाइने फल हो । नेपालका प्रायः ठाउँमा यसको उत्पादन हुन्छ । तर, मानिसले यसको फल मात्र…
3 hours ago Pradeep Karki
विज्ञहरुका अनुसार हात काँप्नुका कारण यस्ता छन्
१. एनिमियाः एनिमिया भनेको शरीरमा रगतको मात्रामा कमी हुनु हो। रगतको कमीले पनि हात काँप्ने समस्या देखिन्छ। २. स्ट्रोकः स्ट्रोक…
यी कुरा ध्यान दिनुपर्ने गर्भावस्थामा
महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको आफैं ख्याल राख्नुपर्छ । गह्रौ वस्तु नउठाउने र सामान्य काम गरे पनि शरीरलाई असर पार्ने गरी अप्ठेरो…
यसरी जोगाउन सकिन्छ जाडोमा ओठ
नकोट्याउनुस् ओठमा जमेका मृत छाला औँला अथवा नङले कोट्याएर निकाल्ने गर्नु हुँदैन । नत्र घाउ लाग्न सक्छ । बाममाथि लिपस्टिक…
यी खराब बानीले ​मुटु बिगार्छ
१. चुरोट पिउँदा पनि रक्तनली मोटो भएर रक्तप्रवाहमा बाधा पुग्छ र मुटुरोगको सम्भावना ह्वात्तै बढ्छ । २. धेरै खाँदा रक्तनलीमा…
एक्स–रे गल्तीले आविष्कार भएको थियो
यसरी एक्स–रेको आविष्कार भयो र शरीरभित्रका अंगको अध्ययनमा यसले ठूलो क्रान्ति ल्याइदियो । एउटा काम गर्दै जाँदा गल्तीका कारण अर्कै…